को होलान् उनी ? ग्वार्कोको सडकवाट उठाएर प्रहरीले अस्पताल नपुर्याउँदै भयो निधन – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/को होलान् उनी ? ग्वार्कोको सडकवाट उठाएर प्रहरीले अस्पताल नपुर्याउँदै भयो निधन
को होलान् उनी ? ग्वार्कोको सडकवाट उठाएर प्रहरीले अस्पताल नपुर्याउँदै भयो निधन
काठमाडौ । ललितपुरको ग्वार्कोमा एक ब्यक्ति बिरामी अवस्थामा फेला परेका थिए । उनलाई प्रहरीले उठाएर अस्पताल उपचारका लागि लिएर गएको थियो । तर अस्पतालमा चिकित्सकले भने उनलाई निधन भएको घोषणा गरिदिए । अहिले ति पुरुष को हुन् भन्ने खुलेको छैन । प्रहरीले उनको पहिचान पत्ता लगाउने कोशिष गरेको छ ।
सोमबार बिहान ११ बजे ललितपुरको ग्वार्कोबाट पाटन दरबार स्क्वायर जाने सडकछेउ आन्दाजी ४० वर्षीय पुरूष अर्धचेत अवस्थामा फेला परेका थिए । स्थानियले खबर गरेपछि पुगेको प्रहरीले उनलाई अस्पताल लगेको थियो।
उनलाई प्रहरीकै गाडीमा हालेर ललितपुरस्थित पाटन अस्पताल लगिएको महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक टेकप्रसाद राईले जानकारी दिए। उनलाई अस्पताल पुग्दा नै चिकित्कसले निधन भइसकेको घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पोष्टमार्टमको लागि शवलाई पाटन अस्पतालमा राखिएको छ। उनको निधन कसरी के कारण पनि नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले पोष्टमार्टम पछि मात्र उनको निधनको कारण थाहा हुने प्रतिकृया दिएको छ । तस्बिर सेतो पाटी
काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा कडाइ, अतिआवश्यक सेवा बाहेक अन्य आवतवाजत बन्द
Breaking:कोरोनाकाे कलहले निन्द्रा उडाएकाे काठमाडौँ बासीहरुलाई फेरि अर्को दुखकाे खबर
यस्तो महतत्वपूर्ण काम गर्नका लागि, आए कोरोना खोप लगाएका चिनियाँ कामदार नेपाल हेर्नुहोस्…